crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Hallerbos – Keynta Buluugga ee Biljamka. | HimiloNetwork
Hallerbos – Keynta Buluugga ee Biljamka.
Posted by: Zakariya in Sahanka, Wararka June 13, 2017	0 297 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Badi waqtiyada sanadka, Hallerbos waa mid qurux badan iyo mid aan la xusi karin oo dhacda bartamaha Biljam una dhow magaalada Brussels.
Si kastaba, bilaha April iyo May, waxay isku badashaa Keynta Buluugga ah soo jiidasho dabiici ah oo aan kuwa kale la mid ahayn.
Magaceeda waxay ku heshay dhirta ubaxyada lafcirta ah ee sida roogga uga baxaya. Kuma ahan qeyrul-caadi gudaha Yurub, hayeeshe waxa Hallerbos mid goonni ah waa ubaxyada tirsiga dhaafay ee sida fog u faalalay.
Waa dhul dowli ah oo dhan 569 hectare. Xusidda ugu horreeyey ee laga diiwaan-geliyay jiritaankeeda, hayeeshe waxay oogada dhulka ku dhamaaday markii uu socday dagaalkii labaad. Markii Jarmalku uu jaray badi geedihii ku yiillay.
Mahad waxaa laga celinyaa howl-galka dib u keyminta kaas oo dhacay sanadihii 1930 ilaa 1950. Maanta waxaa laga marag kici karaa sida quruxsan oo ay kusoo laabatay.
Waqtiga ugu fiican ee la booqdo waa bartamaha April. Hal shey oo aad iska ilaalin karto marka aad aado Keynta Buluugga, waa inaad ku soctaa budulka ama jidka dhuuban ee laguu jeexay, haddii kale waxaad cajiimaysaa ubaxyada.
Nasiib darro qof kasta ma ahan mid xeerkan ku dhaqma. Sanadkan, saraakiisha ayaa ku dhawaaqay in dalxiisayaashu ay cagta mariyaan dabiiciga dhirta quruxda leh ee Keynta.
Ereyadu masameeyaan quruxda Blue Forest ilaa aad adigu iskaa u booqato mooyee.
Previous: Sirta Guusha Japan
Next: Koox ku dabaal-degaysa sawir muujinaya dulqaadka diimeed ee Induniisiya.
90-jir ‘Qaadatay’ Diinta Islaamka.
Austria oo Dugsiyada hoose ka mamnuucaysa in loo xirto Xijaabka.
Xiisaha loo qabo Culuumta Baddaha oo soo badanaysa.
Rikoorka Shukaansiga: Lamaane 41 sanadood is shukaansan jiray oo ugu danbeyn is guursaday